? အနောက်မြောက်တိုင်း ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးထွဋ်လှိုင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိနှင့် ကားသမားတို့ ထွက်ပြေးလာပြီးနောက် တပ်တွင်း စိတ်ဓါတ်ကျနေမှုနှင့် အမိန့်မနာခံမှုများ ရှိနေဟု ဖွင့်ဟ - Voice Of Burma
? အနောက်မြောက်တိုင်း ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးထွဋ်လှိုင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိနှင့် ကားသမားတို့ ထွက်ပြေးလာပြီးနောက် တပ်တွင်း စိတ်ဓါတ်ကျနေမှုနှင့် အမိန့်မနာခံမှုများ ရှိနေဟု ဖွင့်ဟ
အနောက်မြောက်တိုင်း ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးထွဋ်လှိုင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိနှင့် ကားသမားတို့ ထွက်ပြေးလာပြီးနောက် တပ်တွင်း စိတ်ဓါတ်ကျနေမှုနှင့် အမိန့်မနာခံမှုများ ရှိနေဟု ဖွင့်ဟ
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးအခြေစိုက် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးထွဋ်လှိုင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိနှင့် ကားသမားတို့ စစ်ကောင်စီတပ်မှ ထွက်ပြေးလာကြောင်း ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ထွက်ပြေးခိုလှုံလာပြီးနောက် စစ်ကောင်စီတပ်တွင်း စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ကျဆင်းနေမှုများ၊ အကြောက်တရားများ၊ အမိန့်မနာခံမှုများ ရှိနေပြီး ထိုသတင်းများ အပြင်မထွက်စေရန် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း ဆိုသည်။
ယင်းအပြင် တပ်ရင်းအများအတွင်း၌ စစ်သားများ၏ ဇနီးမယားများအား လက်နက်တပ်ဆင်ထားကြောင်း၊ စစ်ကောင်စီခန့် ချင်းပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ဥက္ကဋ္ ဦးငွန်ဆန်းအောင်ကိုလည်း လက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
လုံလဲရ်စစ်ကောင်စီစခန်းအား CDF တပ်ဖွဲ့များ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သည့်ဖြစ်စဉ်တွင်လည်း အဆိုပါ လုံလဲရ်စခန်းအား စစ်ကူများ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒုတိုင်းမှူး၏ အမိန့်အား ထန်တလန်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်များမှ မနာခံမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ ဒုတိုင်းမှူး မျိုးထွဋ်လှိုင်မှ မုံရွာရှိ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံ သတင်းအချက်အလက် အတုများ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဒုတိုင်းမှူး၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိနှင့် ကားသမားတို့မှ ဝန်ခံထွက်ဆိုထားသည်။
ဓါတ်ပုံ – ပြောက်ကျားကုတ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားသူမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးထွဋ်လှိုင်ဖြစ်ပြီး၊ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ ဝတ်ထားသူမှာ စစ်ကောင်စီခန့် ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ငွန်ဆန်းအောင် ဖြစ်သည်။
? ရန်ကုန် ရေတပ်စခန်းရှေ့ ဗုံးပေါက်ပြီး စစ်သား ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ၊ တန့်ဆည် မိုင်းခွဲခံရမှု စစ်သား ၂ ဦးသေ၊ ကသာတွင် ပျောက်ကြားတိုက်ခံရ၍ စစ်သား ၂ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး၊ ရွှေဘိုရဲစခန်းကို လက်ပစ်ဗုံးဖြင့်ထု
? တပ်တွင်းဇာတ်တူသားစားတဲ့အမှု ကိစ္စ ပန်ဆယ်လို ဖော်ပြီ